Ku xir mobilada telefishanka: dhammaan xulashooyinka jira maanta | War gadget
Qolka Ignatius | | Mobiles, Telefishinada
Imaatinka kiniiniyada ee suuqa iyo tan iyo markii taleefannada ay qaadanayaan doorka walaalka yar ee kiniiniyada, oo bixinaya shaashadda kiisaska illaa 6 inji, isticmaaleyaal badan ayaa ka tagaya kombuyuutarradooda ku baabba'do nooc kasta oo ka mid ah maaddooyinkaaga casrigaaga ama kaniinigaaga.
Qeyb ka mid ah cilladda, in si uun loogu yeero, sidoo kale waxaa haya kuwa horumariya, kuwa wax dhisaya oo ka shaqeynaya sidii ay u dabooli lahaayeen baahiyaha uu adeegsade kasta oo caadi ah uu lahaan karo kombuyuutar, oo ay ku jirto xulashada ku xirnaanta kombuyuutarkeena. Qodobkaan waxaan ku tusi doonaa fursadaha kala duwan ee hadda la heli karo ku xir moobilkeena telefishanka.
Dukaammada kala duwan ee Google iyo Apple waxaan ka heli karnaa codsiyo nooc kasta leh, laga bilaabo kuwa na siiya marin u helka shabakadaha bulshada, kuwa noo oggolow inaan soo saarno nooc kasta oo nuxur ah ku kaydsan kombuyuutarkeena iyada oo loo marayo kuwa noo oggolaanaya inaan xitaa soo dejino iyaga oo aan u isticmaalin kombuyuutar wakhti kasta.
Markaad aragto fursadaha laga heli karo suuqa ee adeegsadayaashu uga tagi karaan kombuyuutarradooda dayacan, qodobkan waxaan ku tusi doonnaa siyaabaha kala duwan ee loo heli karo ku xir moobilkeena telefishanka, ama inaad si toos ah u daawato shaashadda taleefannadeenna casriga ah ama aad ugu raaxeysato fiidyowyo ama filimmo shaashada weyn ee gurigeenna. Laakiin marka hore waxaan sharraxayaa dhinacyo ay tahay in xisaabta lagu daro, maaddaama dhammaan borotokoollada isgaarsiintu aysan na siinin fursado isku mid ah.
1 Waa maxay Miracast
2 Waa maxay AllShare Cast
3 Waa maxay DLNA
4 Waa maxay Airplay
5 Ku xir taleefannada casriga ah ee 'Android' telefishanka
5.1 Xiriirka HDMI
5.2 Isku xirka MHL
5.3 Isku xirka Slimport
6 Ku xir taleefannada casriga ah ee Android telefishanka adigoon fiilo lahayn
6.2 Sanduuqa TV
7 Isku xir iPhone si TV
7.1 Hillaac fiilada HDMI
Waa maxay Miracast
Miracast waxay noo ogolaaneysaa inaan wadaagno u fiirso waxyaabaha ku jira desktop-ka taleefannadeenna casriga ah oo shaashad buuxda ku leh TV-gayaga tusaale ahaan, ciyaar ama codsi aan dooneyno inaan ku aragno cabir ka ballaaran. Sida iska cad, waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa inaan ku ciyaarno fiidiyowyo iyo maqal aan keydinay, laakiin dhibaatada ka dhalata ayaa ah in shaashadda qalabkeennu markasta ay tahay inuu daaran yahay, maadaama ay tahay calaamadda lagu soo saarayo telefishanka.
Miracast waxay ku habboon tahay qalabka tooska ah ee WiFi, Markaa haddii aan haysanno telefishan la jaan qaadaya tiknoolajiyaddan iyo taleefan casri ah oo nooc ka sarreeya Android 4.2, wax dhibaato ah nagama soo gaadheyno in aannu toos ugu dirno desktop-ka taleefannadeenna casriga ah oo aan lahayn fiilooyin telefishankeenna.
Waa maxay AllShare Cast
Sida caadiga ah, soosaara kastaa wuxuu leeyahay waali magaca hab maamuuska qaarkood in la isku dayo in la qaato mudnaanta abuurkeeda. AllShare Cast waxay la mid tahay Miracast, markaa haddii aad leedahay telefishanka AllShare Cast waxaad qaban kartaa howlo la mid ah kan Wifi Direct.
Waa maxay DLNA
Tani waa mid ka mid ah hab maamuuska ugu caansan uguna mid ka mid ah aaladaha ugu badan ee suuqa lagu isticmaalo. Hab-maamuuskan ayaa noo oggolaanaya la wadaag macluumaadka ku jira shabakadda qalab kasta oo ku xiraniyadoon loo eegin soo saaraha. DLNA waxaa laga heli karaa telefishanno fara badan oo smart ah, laakiin sidoo kale taleefannada casriga ah, ciyaartoyda Blu-ray, kombiyuutarada ... Thanks to hab maamuuskan waxaan u diri karnaa wixii maqal ama muuqaal ah feyl kasta oo ka mid ah aaladaha la jaan qaada oo si toos ah loogu ciyaaro, sida a mobile ama kiniin ah.
Waa maxay Airplay
Sida Samsung oo kale, Apple sidoo kale waxay lahayd baahi loo qabo in la "hindiso" hab maamuuska isgaarsiinta wireless-ka noocan ah oo loo yaqaan AirPlay. AirPlay waxay na siisaa astaamo isku mid ah tiknoolajiyada DLNA laakiin waxay ku xaddideysaa iswaafajinta qalabka shirkadda, taas oo ah, waxay la shaqeysaa oo keliya iPhone, iPad iyo iPod taabashada.
Tiknoolajiyaddan ayaa timid suuqa 2010 iyo toddobo sano ka dib, 2017, shirkadda ku taal Cupertino ayaa cusbooneysiisay iyada oo ugu yeertay AirPlay 2 waxayna siineysaa howlo badan sida suurtagalnimada u ciyaaro si madax banaan qalabyada kala duwan ee gurigeenna, oo ku jira qaab muuqaal maqal ah.
Waqtigaan la joogo suuqa aad ayey u adag tahay in laga helo, hadii aysan macquul aheyn, TV ama Blu-ray player oo la jaan qaada tiknoolajiyadan, maadaama si looga faa'iideysto waa inaan dhex marnaa sanduuqa oo aan isbarbar dhignaa Apple TV, qalab loogu talagalay tiknoolajiyaddan.
Ku xir taleefannada casriga ah ee 'Android' telefishanka
Nidaamka hawlgalka ee Android waxaa laga heli karaa tiro badan oo soosaarayaal ah mid walbana wuxuu na siiyaa habab kala duwan oo aan ugula wadaagi karno telefishanka telefishanka agabkiisa. Maskaxda ku hay taas maahan soosaarayaasha oo dhan inay na siiyaan xulashadanIn kasta oo in muddo ah hadda, iyo gaar ahaan taleefannada casriga ah ee heer sare ah, ikhtiyaarkan ikhtiyaar loo baahan yahay.
In kasta oo tirada aaladaha leh xiriirka HDMI aysan aad u weyneyn, haddana suuqa waxaan ka heli karnaa terminal aan caadi ahayn oo noocan ah isku xirnaanta, nooc yar, kaasoo noo oggolaanaya inaan fiilo fudud ayaa telefoonkeena casriga ku xira TV-ga oo waxaad ku wada ciyaartaa desktop-ka, ciyaaraha iyo filimada shaashadda weyn ee gurigeenna.
Isku xirka MHL
Noocan ah isku xirnaanta Waa tan ugu badan ee sannadihii ugu dambeeyay loo isticmaalo soo saarayaasha. Haddii taleefannadeenna casriga ahi ay la jaan qaadi karto MHL waa inaan ku xirnaa fiilo USB ah oo dhinac ah iyo HDMI oo dhinaca kale ah. Si wax walboo ay u shaqeeyaan si sax ah waa inaan sidoo kale ku xiraa xeedhada taleefankeena casriga ah fiilada, si ay u hesho tamar ku filan oo lagu diro shaashadda iyo wax kasta oo ay soo saarto. Nidaamkani wuxuu ina tusayaa shaashadda taleefannada casriga ah ee TV-ga wuxuuna noo oggolaanayaa inaan ku raaxeysano ciyaaro ama filim shaashadda weyn.
Sidaan kor ku soo sheegay, talefannada casriga oo dhami ma wada jaan qaadi karaan tiknoolajiyaddan, markaa haddii marka aad adeegsanayso fiiladan taleefankaaga casriga ah aan calaamadda laga muujin karin TV-gayaga, waxay ka dhigan tahay ma awoodi doonno inaan nuqul ka sameysano shaashadda taleefanka casriga ah telefishanka, uguyaraanna fiilo. Fiilada MHL waxay leedahay qiimo kudhowaad 10 euro waxaana ka heli karnaa ficil ahaan dukaan kumbuyuutar jirka ah.
Sony iyo Samsung waa shirkadaha ugu waaweyn ee bixiya isku xirka noocan ah taleefannadooda casriga ah, waana wax waa inaad tixgelisaa haddii aad qorsheyneyso inaad si dhakhso leh u cusbooneysiiso oo aad rabto inaad adeegsato qaabkan.
Isku xirka Slimport
Soo-saareyaashu waxay caado u leeyihiin inay naga jaangooyaan isku xirnaanshaha iyo 'Slimport' waa kiis kale oo soo jiita dareenka, maaddaama ay noo oggolaaneyso inaan sameyno isla wixii loo maro MHL, laakiin waxaan u baahanahay fiilo qaali ah, oo waxay leedahay qiimo ku dhow 30 euro. Farqiga kale ee isku xirka MHL ayaa ah inaysan muhiim ahayn in lagu xiro xarkaha mobilada xarkaha si ay u shaqeyso. Soosaarayaasha ugu muhiimsan ee doorta nidaamkan waa BlackBerry, LG, Google, ZTE, Asus ...
Ku xir taleefannada casriga ah ee Android telefishanka adigoon fiilo lahayn
Haddii aan dooneyno inaan u dirno fiidiyow ama muusig telefishankeenna iyadoon la adeegsan fiilooyinka, waa inaan u dhaqaaqnaa Qalabka Google socon kara, tiknoolajiyad la jaan qaadi karta Android taasna waxay noo ogolaaneysaa inaan u dirno waxyaabaha ku jira aalad yar oo ku xirta dekedda HDMI ee telefishankeenna sidaasna ugu raaxeysta fiidiyowyada shaashadda weyn. Nidaamka noocan ahi nama oggolaanayo in aannu u dirno dhammaan kombuyuutarrada telefishanka, sidii in aannu ku samayn karno fiilooyinka aan kor ku soo sheegay.
Haddii aan raadineyno qalab noocan oo kale ah oo na siiya dammaanad ku filan si aanan u helin dhibaatooyin xagga taranka ah, ikhtiyaarka ugu fiican suuqa waa Google's Chromecast, aalad ku xirta dekedda HDMI ee telefishankeenna oo aan u diri karno fiidiyowyo iyo muusig si loogu dhagaysto telefishankeenna.
Suuqa waxaan ka heli karnaa noocyo kale oo qalab ah oo ay maamusho Android oo na siiya iswaafajin Google Cast, laakiin sidoo kale noo oggolow inaan ku raaxeysano ciyaaraha lagu rakibay aaladda sidii oo ay tahay taleefan casri ah. Haddii aad rabto inaad aragto midka ku habboon baahiyahaaga, waxaad u mari kartaa maqaalka Shan Sanduuqa TV-ga oo leh Android dhammaan miisaaniyadaha.
Isku xir iPhone si TV
Apple waligeed waxaa lagu yaqaanay isku dayga in ay xakameyso wax walboo la xiriira aaladeeda, laga soo bilaabo fiilooyinka xadhiga (30 biinanka iyo hada hillaaca) ilaa hab maamuuska isgaarsiinta ee aaladaha kale. Sida la ogyahay, inkasta oo uu leeyahay xiriir Bluetooth ah, iPhone awood uma leh inuu u diro dukumiinti ama feyl kasta Bluetooth-ga, mooyee inuu yahay iPhone.
Kiisaska gaarka ah ee aan isku aragno, Apple wuxuu ku soo noqdaa si uu ula baxsado oo haddii aan rabno inaan awood u yeelano inaan soo bandhigno shaashadda iphone-ka telefishanka, ma haysan doonno wax kale oo aan ahayn inaan sanduuqa dhex marno oo aan helno Apple TV , ama si fiican u qabso xarigga u dhigma, fiilo aan sax aheyn mid jaban. Ma jiraan fursado dheeraad ah oo arrintan la xiriira.
Hillaac fiilada HDMI
Habka ugu raqiisan ee lagu muujin karo waxa ku jira iPhone-ka, iPad-ka ama iPod taabashada telefishanka ayaa laga helaa fiilada hillaaca illaa HDMI, na tusi doonaa interface-ka oo dhameystiran, oo ay ku jiraan desktop-ka qalabkeenna shaashadda telefishanka. Danab AV adabtarada isku xiraha dhijitaalka ah. Adapter-kan ayaa lagu qiimeeyay 59 euro wuxuuna sidoo kale noo ogolaanayaa inaan lacag ka qaadno aaladda inta aan TV-ga ka ciyaareyno.
Laakiin haddii aanan ku xirneyn HDMI telefishankayaga, waan isticmaali karnaa Hillaac adabtarada VGA, taas ayaa noo ogolaaneysa ku xir qalabkeena qalabka VGA telefishanka ama kormeeraha. Xaaladdan oo kale, waa in lagu xisaabtamo in codka lagu soo saari doono aaladda, oo aan loo marin telefishanka maadaama ay ku jirto adabtarada HDMI.
Ikhtiyaarka kale ee la heli karaa waa in la iibsado TV-ga Apple, laga bilaabo nooca jiilka 4-aad, maadaama ay tahay moodelkii ugu da'da weynaa ee Apple wali iibiso. Qalabkani wuxuu kaloo noo oggolaanayaa inaan ku tusno waxyaabaha aaladdayada ku jira TV-ga, sidoo kale desktop-ka adigoo muraajicinaya ama si toos ah ugu soo diraya Apple TV hadday tahay muusig ama fiidiyow. Jiilka 4aad ee Apple TV iyo 32GB oo keyd ah Waxay leedahay qiimo dhan 159 euro. Apple TV 4k 32 GB waa qiimahiisu yahay 199 euro halka qaabka 64 GB uu gaarayo 219 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Sawir iyo dhawaq » Telefishinada » Ku xir mobilada TV-ga
Waxaan falanqeyneynaa Wiko UPulse, mobiil leh kamarad wanaagsan iyo qiime xoogaa sarreeya